IKadikoy Tavsantepe Metro Times | RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara34 IstanbulKadikoy Tavsantepe Subway Times
17 / 11 / 2019 34 Istanbul, sesitimela, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, Isifunda saseMarmara, Metro, TURKEY
kadikoy tavsantepe metro map
IKadıköy Tavşantepe Metro Hours: 1 yomugqa. Isiteji laqedwa e-2012 futhi savulwa ukusebenza nesiteshi se-21,7 esigabeni se-16 km phakathi kweKadıköy neKartal. Ngokwakhiwa kweziteshi zakwa-Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik nezaseTavşantepe, i-2 yomugqa. isigaba sesiphothuliwe. 2. Ubude bomugqa bukhuphukele kwi-26,5 km futhi inani leziteshi lenyukela kwi-19. Isikhathi sokugijima esimaphakathi somugqa imizuzu ye-82.
Ulayini uhlala kumzila we-D100 esifundeni se-Acıbadem oqala kusuka eKadıköy bese ulandela le ndlela eya eTavşantepe. Kukhona imoto ye-52 (i-13 isitimela) indawo yokusebenzela nokulondolozwa enesibalo sezimoto eziphelele ze-32 kulayini ophakathi kweziteshi zaseMaltepe naseHuzurevi nasendaweni yesiteshi seMaltepe. Lonke ulayini, kufaka phakathi indawo yokugcina impahla kanye nezindawo zokusebenzela, lwakhiwa ngaphansi komhlaba.
Sabah 06.00kuMetro ese-Istanbul 24.00 kuze kufike isikhathi. Njalo i-4 isindisa abagibeli isikhathi ngokuba nohambo olulodwa ngomzuzu.
I-Kadikoy Tavsantepe Metro Station Stakhiwo
Imisinga yomugqa ifaka phakathi i-TBM phakathi kweKadıköy - Kozyatağı neKartal - Kaynarca; Yembiwe indlela ye-NATM phakathi kweKozyatağı - iKartal. Isiteshi saseBostanci sinomugqa wesitimela owengeziwe kanye namapulatifomu amabili aseceleni acubungula isidingo sokusebenza ngokunye. Zonke ezinye iziteshi zazakhiwe njengamapulatifomu aseceleni. Ubude besiteshi ngamamitha we-180 futhi kufanelekile ekusebenzeni kwesitimela nge-8. Kukhona abahamba nge-259 kanye nama-lifoni we-70 esikhungweni. I-30 i -tiletile yenzelwe ukuvumela ukuhamba kwabagibeli abakhubazekile.
UHLELO LOKUPHEPHA NOKUPHEPHA
Izimo zokususwa kwabantu ababhemayo kanye nabagibeli zilungiselelwe ukumelana nezimo ezingezinhle ezingahle zenzeke eKadıköy Tavşantepe Metro Line kanti kuye kwahlolwa izindlela ezihlobene nalezi zimo. Ngamakhamera we-991 ephelele eziteshini, uhlelo lubhekwa ngokuqhubekayo, lulawulwa futhi luhlolwa onogada.
Ukusayinwa komugqa nendawo yokubeka indawo kunohlelo lokuxhumana olususelwa kwiselula. Uhlelo lokusayina uhlelo lweThales CBTC futhi izitimela zinokupaka ngaphandle kokushayela.
Yonke imishini esetshenziselwa ekwakhiweni komugqa ikhethiwe kusuka ezintweni ezinokushisa okushisa futhi azikhiphi amagesi anobuthi. Ukuqinisekisa ukuthuthwa kwabagibeli ngesikhathi esifushane futhi ngokuphepha uma kwenzeka umlilo; Ukusebenza okuzenzakalelayo ngokugcwele, ikakhulukazi amazinga ahambisana ne-NFPA, ukulawulwa kwentuthuko enokuthenjelwa kanye nesistimu yokukhishwa kuyatholakala.
E-Kadıköy Tavşantepe Metro Line, ukuhlinzeka kwamandla kagesi lonke kuqhutshwa amaphuzu ahlukene e-3. Uma wonke amaphuzu okunikezwayo amathathu ehluleka, ama-generator ku-terminal ye-2 ehlukene avuliwe. Ngokusetshenziswa kwamagalajethi, zonke izitimela emhubheni zihanjiswa esiteshini esiseduze futhi abagibeli baxoshwa. Uma kwenzeka ukwehluleka kokunikezwa kwamandla nokuhluleka kwama-generator; Uhlelo lokukhanyisa kanye nezinhlelo zokulawula i-electronic zinganikezwa amandla okuphazamiseka okungenakuguqulwa kwamahora we-3.
I-Kadikoy Tavsantepe Metro Transfer Izikhungo
T3 Kadıköy - iModa Tram Line, imigqa yedolobha, amabhasi olwandle kanye nezinjini zasolwandle eKadesıköy Station,
E-Ayrılık Isiteshi Somthombo, ukusebenza kukaMarmaray,
Ukusebenza kweMetrobus eStrenal Station,
E-Pendik Station, ukudluliselwa ku-Pendik High Speed ​​Train Station kungenziwa yi-IETT amabhasi.
Kadikoy Tavsantepe Metro Telusito
Imephu Kadikoy Tavsantepe Metro
Kadıköy Tavşantepe Metro Stations Route Isikhathi
I-Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line ivula kusasa
Iyini umcimbi wokuvula weTavşantepe Metro Station namuhla?
I-Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe Metro Line evuliwe ngomkhosi
Namuhla Emlandweni: 10 Okthoba 2016…
Namuhla Emlandweni: 21 Januwari 2017…
Sabiha Gökçen Tavşantepe Umgwaqo Wesitimela
I-Comfort Iza Ku-Izmit Tavsantepe Roads
Kadıköy - I-Sultanbeyli Railway System Metro Line…
Ingozi yomsebenzi ekwakhiweni komasipala eKadıköy, 1 Dead